မိမိရဲ့ အချစ်တော်တိုက်ကြက်ကိုမြိုထားတဲ့စပါးကြီးမြွေကို ပြန်အန်ထုတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လယ်သမား | Buzzy
မိမိရဲ့ အချစ်တော်တိုက်ကြက်ကိုမြိုထားတဲ့စပါးကြီးမြွေကို ပြန်အန်ထုတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လယ်သမား
ထိုင်းနိုင်ငံPathum Thani ကအိမ်လေးတစ်ခုမှာ လယ်သမားတစ်ယောက်ပာာ သူရဲ့အင်မတန်တော်တဲ့ တိုက်ကြက်၂ကောင်ပျောက်ဆုံးသွားတာကိုသတိထားမိပြီး ၀မ်းနည်းမဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။Nut Wattana ပာာအိပ်ယာကနိုးနိုးချင်းကြက်ခြံကိုသွားကြည့်တဲ့ချိန်မှာ၎င်းရဲ့တိုက်ကြက်နှစ်ကောင်ပျောက်သွားတာကြောင့် စိတ်တိုလျက်ရှိနေပါတယ်။အစပိုင်းမှာ ကြက်သူခိုးတွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆမိပေမယ့်တကယ်ကတော့ သူရဲ့စိုက်ခင်းအပင်တွေကြားထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ ၁၅ပေအရှည်ရှိစပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်ပာာ၎င်းရဲ့ကြက်ကို မြိုထားတာကိုသတိထားမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုသိသိချင်းမှာ ၄င်းပာာ မြွေဖမ်းသမားတွေကိုခေါ်ပြီး၎င်းရဲ့ကြက်အသေကိုပြန်ထုတ်ပေးရန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်း မြွေကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေပာာမြွေကို ကြမ်းပြင်မှာထားစေပြီး သတ္တုတုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ အသာလေးထိုးပြီးချိန်းမှာတော့မြွေပာာတဖြည်းဖြည်းမြိုထားရာမှ စတင်ပြန်အန်ထုတ်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ကြက်နှစ်ကောင်တွန်သံမကြားတာကြောင့်တစ်ခုခုလွဲမှားနေပြီဆိုတာသိရှိပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ စပါးကြီးမြွေမြိုထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တေ်ာဒီတိုက်ကြက်နှစ်ကောင်ကို ထိုင်ဘတ်ငွေ ၃၀၀၀၀နဲ့ဝယ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တော်တိုက်ကြက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာ..ကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သေပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမြေမြုပ်ပေးချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး။ဒါကသူရဲ့သဘာဝပဲလေ”ဟုလယ်သမားက မြွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက မကြာမှီထုတ်လုပ်တော့မယ့် လူနဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ Sex Doll တွေ
ခင်ဝင့်ဝါကို အနမ်းခြွေနေတဲ့ ကွီးက ဘယ်သူလည်း ?
အစွန်းရောက်စွာတက်တူးထိုးသူများထဲမှ အဆိုးဝါးဆုံး (၁၇)ယောက်
သရဲ ၊ တစ္ဆတွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား ?
သီပေါစော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်နဲ့ ဇနီး မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Twilight Over Burma ဇာတ်ကား အစအဆုံးပါတဲ့
အိမ်သာသွားချင်လို့ အကူအညီတောင်းတာ မပေးလို့ စတိုးဆိုင် ကောင်တာပေါ် တက်ပြီး ကိစ္စရှင်းလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး
ဖင်နဲ့ ပုလွေမှုတ်ပြသွားတဲ့ ဂျပန်မလေး
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် မော်ဒယ် Rhian ရဲ. snap shoot များ
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အမာ ရွတ်တွေ ပေါ်တွင် တက်တူး ထိုးခြင်း ရေပန်းစားလာ